Gịnị bụ Ntanetị nke Ihe? Gịnị ka ọ pụtara maka ire ahịa? | Martech Zone
Njikọ Internetntanetị na-aghọ eziokwu maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọ bụla. Nke a ga - arụ nnukwu ọrụ na nnukwu data na azụmaahịa n'ọdịnihu anyị dị nso. Gartner ebuola amụma na site na 2020 a ga-enwe ihe karịrị ijeri ngwaọrụ 26 ejikọrọ na Internetntanetị. ] = [op0-9y6q1
Gịnị bụ Ntanetị nke Ihe
Ihe na-ezo aka n'ihe ndị anyị na-echeghị na ha nwere njikọ. Ihe nwere ike ịbụ ụlọ, akụrụngwa, ngwaọrụ, ụgbọala, ma ọ bụdị mmadụ. Ndị mmadụ ga-ejikọ ndị mmadụ, ndị mmadụ ga-ejikọtakwa ihe, ihe ga-ejikọtakwa na mmadụ, na ihe ga - emekọtakwa n’ihe na - aga n’ihu.
Nkọwa Wikipedia bụ:
Ofntanetị nke Ihe (IoT) bụ ntanetị nke ihe anụ ahụ ma ọ bụ "ihe" agbakwunyere na eletrọniki, ngwanrọ, ihe mmetụta na njikọta iji mee ka ọ nweta uru na ọrụ ka ukwuu site na ịgbanwere data na onye nrụpụta, onye ọrụ na / ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ ejikọrọ. A na-amata ihe ọ bụla site na sistemu kọmputa ya agbakwunyere mana ọ na-enwe ike ịmekọrịta n'ime akụrụngwa ịntanetị dị.
Usoro ahụ Internet Ihe bụ Kevin Ashton, onye ọsụ ụzọ nkà na ụzụ Britain na 1999 dere.
Ntanetị nke ihe (IoT) ga - arụ ọrụ dị ukwuu n'ụzọ anyị si eme azụmaahịa na ịmatakwu ozi na ụwa jikọtara ọnụ. Mana anyị nwere ikike akụrụngwa iji hapụ IoT iruzu oke ya? Anyị enwerela ike ịchọpụta nnukwu uru ọ bara na azụmaahịa dijitalụ? Gaa na ihe omuma ihe omuma a iji muta ihe banyere ya. Isi Iyi: Ọnọdụ²
Ezitere ndị folda na MindFrame, vidio a bụ ihe ngosi dị egwu banyere ọdịnihu nke ntanetị sitere na IBM Otu Amamihe, na ngwaọrụ tinye n'ọrụ Internet, na echiche banyere ọdịnihu anyị na mbara ala a na oké osimiri nke data anyị na-dum. Ọ bụ ezie na anyị na-eto ngwa ngwa site na 1 ijeri ndị ọrụ na tontanetị ruo ijeri 2, ọnụọgụ nke ngwaọrụ na-eto na ọbụna ọsọ ọsọ. N'ụlọ nke m, enwere m mmadụ 2, mana opekata mpe ngwaọrụ iri na abụọ!
Kedu ka ndị ahịa a ga-esi metụta ya? Kwa data nke weghaara na nke gi ihe nwere ike inyere gị aka ịghọta ndị ahịa gị nke ọma ka ị wee mara ihe ị ga-agwa onye ahịa ya n'oge kwesịrị ekwesị. -Kwanyere Hyper-ezubere (ọbụlagodi site na ihe) ga - enyere ndị na - ere ahịa aka ijikwa nkwukọrịta nke ọma karịa na - enweghị mkpa maka igbochi usoro ịre ahịa ahịa.
Tags: 2020ụwa mara mmagartnerinternet nke iheiotKevin ashtonmindframe
BlueConic: Chịkọta, jikọọ, ma bulie Njem Ndị Ahịa